Gawaarida madaxbanaan ayaa ah riyo - Uber - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA • TECH & TELECOM Gaadiidka gaar loo leeyahay ayaa ah riyo - Uber
Gawaarida madaxbanaan ayaa weli ah riyo - Uber
Gaadiidka dadweynaha ee waddooyinka magaalooyinka ku yaalla adduunka oo dhan ... Rajo waxay leedahay wax ay ku riyoonayaan. Laakiin waa in aynaan ka qaadin waaxda Uber Technologies.
Shirkadda VTC ayaa maalgashanaysa cilmi-baaris, laakiin kooxaheeda cilmi-baarayaasha ayaa sheegaya in ay wali tahay inay ku tiirsan yihiin darawaliinta bani-aadamka.
"Waxaa jira caqabado dhowr ah. Laakiin ugu dambeyntii, waxaan arki doonaa gawaarida madaxbanaan wadooyinka waaweyn iyo sidoo kale magaalooyinka. Dhibaatooyinku way kala duwan yihiin iyadoo ku xiran hadba waxaan ku jirnaa wadooyinka ama magaalooyinka. Waxaa jira dad badan oo sameeya waxyaabo badan oo aadan qorsheynin. Ayuu yiri Raquel Urtasun, oo ah madaxa cilmi-baaraha ee kooxda teknooloojiyada ee Uber (ATG).
Fikradda waa in la hubiyo in aan la xisaabtameyno heerarka amniga ugu sarreeya iyo in aan dhab ahaannu tixgelinno ammaanka ammaanka.
Horumarinta kooxaha cilmi baarista ee Uber ayaa si aad u qoto dheer u leh qaybta maadama ay shirkaddu ballan-qaadday in ay samayso tusaalooyinkeeda koowaad ee wareegga ka hor dhamaadka sanadka. Falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in gabbaadyada guuleysta ee gaadiidka madaxbannaan ay muhiim u yihiin shirkadda VTC. Waxay qorsheyneysaa in ay maalgaliso hal milyan oo doolar oo Toronto, Canada ah si ay u ballaariso imtixaankeeda.
"Waxaan u maleynayaa inay jiri doonaan ogeysiisyada shirkadda, laakiin hadda wax war ah kama hayno. Marka aan dareemo diyaargarow, waxaan tagi doonaa magaalooyinka kale. Maxay muhiim u tahay inaanu ku degdegayno cadaadis ... Waxaan cadaadis saarnaa. Sababtoo ah waxaan ka laabannay filimkayaga, qof kastaa wuxuu yiraahdaa Uber waa la jabiyay, taasina maahan. Waxyaabo badan ayaan ku sameynay shaybaarka leh baaritaan aan rasmi aheyn. "
Uber wuxuu dhexdhexaadiyay xamaasadiisii ​​kaddib markii mid ka mid ah gawaaridiisa gaarka ah ee wali ay ku jiraan maxkamad ku taala waddada March ee 2018.
Dhacdadan ka dib, shirkadda waxay ka soo jiidatay baabuurkeeda aan la joogin ee waddooyinka waxayna hakisay imtixaanadii ka bilowday xarunteeda gaarka ah ee Arizona. Laakiin tijaabooyinkan ayaa dib u bilaabay Disembar hore.
"Waa wax murugo badan oo nasiib darro ah wixii dhacay. Oo mar labaad ayaanu u falanqeynay waxa aan qabano ... maaha kaliya marka la eego shilkan gaar ah. Fikradda waa in la hubiyo in aan la xisaabtameyno heerarka amniga ugu sarreeya iyo in aan dhab ahaannu tixgelinno ammaanka ammaanka. "
Inkasta oo ay qasab ku noqotay, koox maal-galiyeyaasha ah ayaa diyaar u ah in ay $ 1 bilyan oo doolar ku maal galiso unugga cilmi-baarista gaadiidka ee Uber.
Google wuxuu isticmaalaa 'Avengers: Endgame' si Pixel 3 u muuqato mid qaboobo oo ku dhawaaqo bilowga soo socota ee Pixel 3a
Weego, codsi ah in lagu beddelo gaadiidka dadweynaha